Isgaarsiinta Voice – Category – Android – Vessoft
Isgaarsiinta Voice – Android
Isgaarsiinta Voice Webcams Software A caan ah oo isgaarsiinta codka lacag la'aan ah iyo is-dhaafsiga ee fariimaha qoraalka ah ee u dhexeeya dadka isticmaala ku. Sidoo kale software awood u yeeran ee telefoonada gacanta iyo kan guriga ee canshuuraha wanaagsan.
Isgaarsiinta Voice Webcams Software in la dhaafsado farriimaha qoraalka ah iyo ka dhigi taleefan ama video ah. Codsiga waxaa awood u ku xidhiidhiyaa CHAT group oo u eegto macluumaadka ku saabsan dadka kale ee.
العربية, English, Українська, Français... Tango 3.26.211814
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala oo dunida ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay u sameyso wicitaano cod iyo video ama wadaagaan fariimaha qoraalka ah.
العربية, English, Français, Español... Line 6.8.2
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala oo dunida ah. Software waxay kuu ogolaanaysaa inaad in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah ama sameyso wicitaano cod iyo video.
العربية, English, Français, Español... imo 9.8.000000003781
Isgaarsiinta Voice Chat Webcams Codsiga fariin iyo isgaarsiinta codka. Sidoo kale waxaa suurogal ah ee chat saaxiibada ka soo adeegyada kala duwan iyo shabakadaha bulshada.
العربية, English, Українська, Français... WeChat 6.3.28
Isgaarsiinta Voice Chat Webcams Macmiilku waxa uu xor ah in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka iyo codka. Sidoo kale waxa ay taageertaa isgaarsiinta video iyo is-weeydaarsiga xogta kala duwan.
العربية, English, Français, Español... ooVoo 3.0.2
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod ama video ee tayo sare leh iyo fariimo ay isdhaafsadaan ah.
Isgaarsiinta Voice Chat Qalabka ayaa in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka iyo codka. Software ayaa awood u ku xidhiidhiyaa CHAT group iyo dhaafsadaan faylasha ama macluumaad la xiriir.
العربية, English, Українська, Français... Hangouts 14.0.136618992
Isgaarsiinta Voice Network Bulshada Webcams Ninkii wargeeyska ahaa wuu caanka ah ee isgaarsiinta qoraalka, codka iyo muuqaalka ah. Sidoo kale software falgalka uu la codsiyada ugu badan ka adeega Google caan ah.
Isgaarsiinta Voice Chat Software Popular in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah oo ay ka dhigi cod ama video soo wacay. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan files iyo waxaa ka mid ah set badan oo smileys.